HomeAfaan OromooDogongora Bara 2018 Hojjetameef Uummatni Keenya Har’a Gatii Guddaa Baasaa jirra
Dogongora Bara 2018 Hojjetameef Uummatni Keenya Har’a Gatii Guddaa Baasaa jirra.
Damee Boruu: Waxabajjii 13, 2020
Fincilli Diddaa Garbummaa bara 2018 Qeerroo Bilisummaa Ormoon hoogganamee garbummatti xumura gochuu dhabuun dhiiga uummata keenyaa har’a dhangala’aa jiruuf sababa isa duraa ti. Maddi gatiin aarsaa hara’a Uummatni keessa deebi’ee baasaa jiru dogongora bara 2018 tahe irraa dhufe. Amma bara 2018 kaayyoo fi akeekaa, tooftaa fi tarsiimoon Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabatee warraaqsa bilisummaa hooggane ture seenaa qabeesaa fi kan dinqisiisamuu qabu. Naamusni, dammaqinsa fi ijaarsi Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan sibila caala jabaatuu fi kan uummata biyya lafaaf fakkeenya tahu danda’u yoo jenne of faarsuu hin tahu.
Fincila Diddaa Garbummaa ammam iyyuu aarsaa guddaan uummata keenya haa gaafatu malee seenaa uummata Oromoo keessatti boqqonaa injannoo haaraa galmeesse jira. Harka qullaa waraana Wayyaanee amma funyaan isaa gahu hidhatee jiru injifachuun waan yaadamu hin ture. Garuu Uummanti Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoon hoogganamee diina dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun beekamu kana of irraa kaasuun waan akka laayootti ilaalamu miti.
Warraaqsi uummataa amma aangoo aboomuu hin daneenyetti galama isaa gaheera jechuun hin danda’amu. Biyya lafaa kana irratti warraaqsi uummataa danuun gatagtee hafee jira. Warraaqsi qabsoo Uummata Oromoo bara 2018 waraana Wayyaanee of irraa haa buqqisee malee utuu Fincila Xumura Garbummaa in raawwatiin gatate. Akka yaada koo itti sababni inni duraa fi guddaan warraaqsi keenya humna waraanaa isa utubamuu dhabuu dha. Yaroo sanatti humni WBO dagagee warraaqsicha utubuu hin dandeenye. Inni lammaffaa ijaarsi Qeerroo Bilisummaa Oromoo aangoo qabachuu miti hirmaachuufu waan qophaa’e hin fakkaatu. Hooggannis Adda Bilisummaa Oromoos biyya alaa jiraachuun OPDOn ergamtuun TPLF kan Uummata Oromoo waggaa 27 saamaa fi saamsisaa, hidhaa fi hisisaa, ajjeesaa fi ajjeesisaa ture Uummata Oromoo bakka buutee aangoo aarsaa Uummata keenyaan dhufe dhunfachuuf ayyaana argate.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo aanggoo amboomuuf humna waraanaa guddaa haa dhabu malee mootummaa ceem’umsaa keessaa qooda fudhachuuf dandeetti ni qaba ture jedheen yaada. Haa tahu malee afaanfajii yaaroo jijiramaa sana keessa tahe hundaa dagachaa hin jiru. Yaroo jijjiramaa gabaabduu sana keessatti abbaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo eenyu akka ni walaalame. Sana boodas ijaarsi qeerroo bakka adda addaatti waan hirame fakkaata. Namootni baayyeen korojoo of jala butachaa jijjirama kana keessa waan argamu butachuuf fiiguu malee hegeree Uummata Oromoof kan yaadu ni xiqqaate.
Warraaqsi Qeerroo Bilsummaa Oromoo biyya lafaaf fakkeenyaa guddaa tahee jira. Warraaqsi Uummatni Sudaan godhe kan qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo fakkeenya godhate dha jechuun ni danda’ame. Haa tahu malee Uummatni Sudaan EL Bashiir aaangoo irraa yaroo buusuu humni waraanaa Sudaan aangoo yaroof qabatee filmaataaf akka ceesisu barbaadee ture. Uummatni Sudaan tasa didee mootummaa waloo kan uummata fi humna waraanan hooganamu dhaabbate. Kunis barumsa biraa kufaatii keenya irraa baratan jechuun ni danda’ama.
Har’a galatni guddaan gootata hha tahu malee warra faggeessanii habachuu fi olaantummaa mirga saba isaaniif yaadaniin hoogganamee WBOn jabaachaa jira. Uummatni Oromoo xiqqaa fi guddaan, diiraa fi dubartiin kan biyyaa fi diaspora jirru harka wal qabannee WBO tumsuu qabana. Har’a yaroo teenyee quba walitti qabnu miti. Warri lafa argate, warri mana argate, warri konkolaata argatee, warri taa’itaa fudhate jedhamuu fi warri dhabe hundi keenyaa akka Oromootti maraamartoon qabannee jirra. Guddeelcha jifuu hin qabanee bara 2018 of irratti jigsinee wal taanee of irraa kaasuu qabna. Waan hundaa dura kan dhufu jiraachuu dha. Yoo Uummatni Oromoo jiraate qabeenyaa fi taa’itaa ulfina qabu qabaannee biyya keenya keessa yaaddoo fi dhiphuu malee gammachuun jiraachuu dandeenya.
Akkuma hundi keenya quba qabnnu OPDOn dhiiga qaqallii ilmaan Orommon aangoo qabate. Yaroo as deebitee gootowwan kana girisa jettu dhaga’uu caalaa kan mar’imaan koo na waadu hin jiru. Aarsaa gootowan kanaan aangoo argachuu keenyaaf galatoomaa jechuu haa dhiiftu. Aangoo OPDOf dabarsanee laachuun keenya dagamuu akka hubanne jirra. Qarree fi Qeerroon Oromoo harka ol qabatanii lubbuu isaanii tokkotti qaban utuu hin mararsiifatniin mirgaa fi haqa saba isaanii kabachiisuuf waliin kufanii aarsaa tahuun madaala maaliin akka girisa tahu naaf galu. Maddi isaa tuffii akka tahe naaf gala. Sana caalaa immoo ilmaan nafxanyootaa fi Diqaalota Habashaa gammachiisuuf.
Gara fuula duraas waan har’a keessa jiru fi akkamitti akka keessa seene irraa yoo hin baranne deebinee kufaatii kana fakkaatu hin keessumsiifnu jechuun hin tahu. Mootummaa OPDO kufiisuuf wareegama amma Mootumaa EPRDF kufisuu akka nu hin gaafanne ifa jira. Maaliif yoo jettan Mootummaan kun ofuma isaa iyyuu boola qarqara jira. Guyyaa aangoo dheerefachuuf murtee dabarisiifatee kaasee Kononeel Abiyi akkuma OPDO diige Mootumaa EPRDFis seeraa maataa isaani ittiin diigee jira. Kana booda akka mootummatti namni isaan beeku hin jiru.Yoo kana booda dagadhee mootummaa ittiin jedhe dhiifama naaf godhaa.
Yaaddoobiraa kaasuun fedhu rakkina hamaa deddeebiin namoota Oromoo irratti argaa jiru taha. Yaroo mootummaan tokko kufuu waa keessaa argachuuf fiigichi godhamu dhaabbachuu qaba. Akka dhuunfatti kan argachuu dandeenyu dura akka sabatti hegereen saba keenya maal akka tahu yaaduu fi yaadahuu qabna. Akkuma kana dura agarre WBOn utuu Amboo hin gahiin kan korojoo of jala butee Shagar galu hedduu dha. Akkuma har’a Qeerroo Bilisummaa Oromoo bakka meeqatti qoodame WBO illee gargar qooduuf hin yaalan jechuun hin danda’amu. Gargaarsi WBO goone boru WBO karaa tokko tookkoon keenya deemnu irra akka deemuuf utuu hin taane kaayyoo fi akeeka hordofuu, tooftaa fi trasiimoo walbummaa isaa qabatee akka qabsoo bilisuumma Oromoo irratti xumura gudunfuu gochuuf tahuu qaba.